Ingabe u-Okthoba uyinyanga enhle yamaPisces? - Isikhathi Sokuzalwa Komuntu
Imibuzo Nezimpendulo Ezinhle Kakhulu - IPisces Oct '14 Horoscope
Ngabe iPisces ingaba nenhlanhla kusasa?
I-Inhlanhla yePisces kusasaizinkanyezikuthandazitholeleinhlanhlaempilweni yakho yothando. I-Inhlanhla yePisces kusasai-horoscope yeluleka ukubeka ukholo emizweni yakho. I-Inhlanhla yePisces kusasai-horoscope nayo ithi lesi kungaba yisikhathi esingenakunqotshwa empilweni yakho yothando.
Lo ngumbhalo wakho weLucky Numbers, empeleni ngikhuthazekile ngokomoya ukukunikeza izinombolo zenhlanhla zale nyanga.
Okokuqala, ngithanda ukukwazisa ukuthi ubheke igama lakho kusibali sakho sokubala izinombolo igama lakho lokuzalwaIgama olinikezwe lapho uzalwa Akunandaba Uma usushintshe igama lakho Awusebenzisi leli gama igama lakho lelo wanikezwa lapho uzalwa lo mbhalo usemphefumulweni wakho futhi ubheka isibali segama lezinombolo ngifaka isixhumanisi esingezansi ukuthi ungakwenza kanjani lokho Ngakho-ke u-1 B ngu-2 Uhlanganisa zonke izinombolo bese uziletha enombolweni ejwayelekile phakathi kuka-1 no-9 uma uthola u-22 noma uthola u-11 ungayinciphisi le nombolo njengoba iyinombolo eyi-master, uma kukhona izinombolo ezingekho egameni lakho noma osukwini lokuzalwa? ungabhejeli usuku lwakho lokuzalwa oluphelele kulezo zinombolo. Ake sithi ulahlekelwe u-4 no-8. Ngincoma ukuthi ungahlali ezindlini engizengeza kulezi zinombolo, noma ngibheje noma ngisebenzise lezo zinombolo, ngoba ingasebenzisa i-karma ngalezo zinombolo, KULUNGILE, futhi uma lokho Ukuxhumana kungalungile ngalokhu izinombolo, khona-ke kungaletha okuthile.
Lokho akukuhle, kanjalo nezinombolo zakho zenhlanhla nosuku lwakho lokuzalwa kanjena. Unaziphi izinombolo egameni lakho lentombazane nosuku lokuzalwa. Ngakho-ke hlanganisa usuku lwakho lokuzalwa, ululethe enombolweni phakathi kokukodwa kuya kweziyisishiyagalolunye, noma kungaba u-11 noma u-22, lokhu kungukuzalwa kwakho inombolo yakho yendlela omiselwe ukuyifaka, ufaka inombolo yakho yesiphetho enombolweni yosuku wazalwa, ngakho-ke uma ngabe uzalwe ngosuku lwesi-2 lwenyanga ethile khona-ke ubungeza okungu-2 kunombolo yendlela yakho yesiphetho engenye yezinombolo zenhlanhla ongazisebenzisa enye inombolo enenhlanhla ungasebenzisa enye yezinombolo ekuzalweni kwakho igama? Noma usuku lwakho lokuzalwa noma usuku, ongalusebenzisa enye inombolo enenhlanhla yizinga okhuphuka ngalo, uma lelo banga lilungile, ngakho-ke uma wazalwa ngama-19 degrees Cancer noma kunjalo ngama-19 degrees Cancer ascendant, khona-ke ama-19 degrees noma i-19 kungaba ngokusebenzisa ukufundwa kwezinkanyezi futhi nenombolo yakho enenhlanhla ikunikeze izinombolo zenhlanhla ngokusebenzisa ukubhula ngezinkanyezi-Futhi ngizokwenza umjikelezo bese ngikhetha ngamakhadi bese ngibona uphawu ngalunye lomuntu ngamunye lwezinkanyezi yiziphi izinombolo ozibonayo emakhadini? Lokhu kwenzelwa inyanga entsha kaMeyi eya phambili kwazise u-Uranus useTaurus.
Ngenhlanhla inombolo 7, iziqu zami ezandayo zezimpawu ngu-9 futhi sengivele ngibhejile kakhulu ku-9 futhi ngiwine leli thikithi eThailand ngokudlidliza okuyisishiyagalolunye. Ngakho-ke cabanga nje ngalokho ofuna ukukwenza, yiziphi izinhlanganisela ofuna ukuzenza? Ingabe unazo izinombolo zakho? Ngakho-ke uma unolwazi ngokuthenga ithikithi, noma ukukhetha izinombolo ezithile zelotho, noma ukwenza okuthile okuqondile okudingayo ukuthi usebenzise izinombolo zakho? Ngemuva kwalokho yenza nje. Angazi, uyazi ukuthi uyakugqugquzela ukugembula kepha uma unenkomba futhi uma unezinto ezinhle zokuhamba ukwenza imali noma ukuthola okuthile ngezinombolo ezizokusiza ngakho qhubeka Ngakho-ke ngaphandle kokuqhubeka, ngizovele ngithathe i-spin futhi ngiphelelwe ukuhleleka lapha.
Ngakho-ke sidinga ukwenza ama-Aries to Pisces futhi ngizovele ngikhethe ukuthi iyiphi isitaki engidonselwa kumlingisi ngamunye, ngakho-ke ngiqale ngama-Aries futhi kunjalo, akunjalo? Ngakho-ke ngizokutholela izinombolo, kulungile, ngakho-ke lokho kune-18 sine-18 yama-Aries18 siphinde sibe ne-14 nezinye izinombolo eMelika kanti amanye ama-lotto amakhulu kufanele athande izinombolo ezingama-44 noma ezingama-46 ngakho-ke kufanele mhlawumbe uthole. Ngakho-ke uma unyukela ezinombolweni ezinkulu, ungakwenza lokho uma unezinombolo ezinhle ezinsukwini zakho zokuzalwa, ngakho-ke uma unezine ezine noma eziningi bese ukhetha usuku lwakho lokuzalwa noma izinombolo zegama lakho ungenza u-42. Kulungile , ngakho-ke eziyisikhombisaOne10 ukuze kube u-11 ophindwe kabili nokunye okungaba enye ukuze ngithole no-3333 wama-Aries Kulungile ngoba sinezintathu, okungukuthi ezintathu, futhi ngicabanga ngakho, kuphindwe kabili Ngakho-ke yenza lokhu njengo-3.
Ngakho iTaurus. Ngivele ngayibamba lena. Ngakho-ke sihamba nale Taurus 27 kuye ku-82, ngakho-ke u-2 + 2 ngu-22, ngakho-ke ungenza ama-22 no-5 ngeTaurus.
Ngicabanga nokuthi u-7 weTaurus angahle ahambe no-5 no-2 nge-7Okay. Manje sihlangana neGemini Gemini3 5 8 10 10 ukuze ubusuku obubodwa futhi bube ngamashumi amabili neshumi nesikhombisa. Ngisho nje ukuthi uyisimangaliso futhi, ngakho-ke amashumi ayisishiyagalombili nesishiyagalombili.
Ungahamba amashumi ayisishiyagalombili nesishiyagalombili amashumi ayisishiyagalombili nanhlanu amashumi ayisithupha nesithupha kanye nesithupha isithupha isithupha ukutholela wena u-366336, kulungile, ngakho-ke uhlobo olunjalo luneringithoni. I-Gemini kulungile, uphawu olulandelayo lweCancer 1/1 nami ngithi eyodwa, ngakho-ke futhi ingaba yi-111, futhi ingaba yi-11Noma uma sine-11 ephindwe kabili i-Cancer ingaba yi-4 Okay yomdlavuza noma ingaba yi-11 11 11 noma 22 Ngithola ama-22 lapho kanye no-9 womdlavuza, ngakho-ke futhi kungaba 29 2911 22 unomdlavuza wezinombolo eziyinhloko lapho Kulungile, ngakho-ke lokho kunengqondo. Kulungile i-21 futhi ilungele iCancer, LeoLeo amashumi amabili nanye, amathathu, eyodwa okungaba amashumi amathathu nanye, amane amahlanu, okungaba amashumi amane nanhlanu, amane ayisishiyagalolunye, okungaba ngama-49 noma angama-94, Kulungile, ngokulandelayo ' m isibonakaliso esilandelayo, isibonakaliso esilandelayo sithi, It goOkay, eyodwa engaba yi-11 noma i-twofiveone 15 noma i-51one ibe yi-21 noma i -ambiliGoVirgin Libra96Can be96697 no19OkayWaage1991 9 Ngakho-ke unomoya lapha nabayisithupha abayisishiyagalolunye? Isikhombisa Ngakho uJohane uthi 69.
O, ngabayisishiyagalolunye lapho. Yebo, isithupha ayisikhombisa ayisikhombisa ayisikhombisa nesikhombisa, futhi 16, ngizoba futhi neshumi nesithupha noma 61 kulungile iScorpio kulungile, - noma ishumi nanyeSix6662662one Zero, ukuze kube ngu-10 Kulungile futhi nenye, ukuze kube yi-11 noma i-OneSeventeenSeventeen kwakungu-71 futhi ezintathu.
Kulungile amashumi amathathu nesithupha63-622673 37Mashumi Amabili Mhlawumbe iketanga nalo. kulungile? Kulungile, sinasiphi isibonakaliso ngaphambi kwesibonakaliso esingathi sína kangangokuba kuthiwa yiScorpio Sagittarius. Ngethemba ukuthi asilahlekelwanga uphawu, noma i-Sagittarius eyodwa ishumi nanye kuya kwamashumi amabili nanye amashumi amabili namashumi amabili amashumi amabili nesishiyagalombili futhi 1661 eyodwa111 kuya ku-299 kanye neshumi nesishiyagalolunye futhi Angazi izitaki eziningi kangako futhi kungadingeka ukuthi ngixube inhlanzi yokugcina.
Kulungile, iSagittarius-Capricorn, iCapricorn, lena yi-Aquarius. Kulungile, ezintathu eziyisishiyagalombili eziyisikhombisa nanhlanu ezintathu eziyisishiyagalombili eziyisikhombisa neshumi nanhlanu ngakho-ke amashumi amathathu nesishiyagalombili amashumi amathathu nesikhombisa nanhlanu83-78 Capricorn yini enye enginayo yeCapricorn yesihlanu? Unamademoni akho amahlanu, amathathu nakanjani 553 namakhadi angamashumi amathathu nanhlanu weCapricorn, futhi, Kulungile, i-Aquarius. Kufanele ngishintshe kabusha izinhlanzi.
Mhlawumbe angikakhethi amanye amadeck anele. Kulungile i-Aquarius for4441 1 11224 ngakho-ke u-44 ingu-8 futhi ayisishiyagalolunye ayisishiyagalombili nesishiyagalolunye. Amashumi ayisishiyagalolunye nesishiyagalombili kanye neshumi nesikhombisa neshumi kanye no-2010 ayishumi namashumi amabili Kulungile, leyo yi-Aquarius enhle, ngakho-ke ngizohlanganisa iPisces Pisces izothola okuhle.
kulungile? bheka inhlanhla izinhlanzi zokugcina inhlanhla inhlanhla inhlanhla inhlanhla ngoba ungazitholela izinhlanzi ezinhle zokukhethaLungela izinhlanzi 1: 5 ngakho-ke lokho kungu-15 noma u-51 - okungaba futhi yisikhombisa bese kuthi oyedwa abe munye noma bathathu? Isine sinezinombolo ezithile ezinhle ezingamashumi amane nanye amashumi amane nanhlanu amashumi amane nanhlanu amashumi amane nesishiyagalombili noma 8 futhi u-1 futhi u-2 noma u-1118 wePisces. Ngakho-ke ngithemba ukuthi usijabulele lesi sikhathi futhi yebo, sikufisela inhlanhla. Inhlanhla iyaqhubeka.
Isikhathi esijabulisayo ukujwayela izinombolo zakho. Nginifisela okuhle kodwa manje ciao
Esihlokweni sanamuhla, sizokutshela ukuthi amathuba akho okuceba asuselwa kusibonakaliso sakho se-zodiac. Ngakho-ke noma ngabe uyini umaki wakho, bheka ekugcineni ukuze wazi ukuthi uzoceba kanjani. Ama-Aries: Ama-Aries ngusomabhizinisi we-zodiac ongawenza acebe ngokuzama ukulwa.
Ama-Aries angcono kakhulu lapho engaba umholi wento ethile, ngakho-ke imincintiswano, imincintiswano, nemincintiswano iyakhanga kubo. Kepha imvelo yama-Aries engacabangi futhi engenasineke ingakushiya unenkinga yokonga, ukutshalwa kwezimali kwesikhathi eside, nanoma yini eba yinto ejwayelekile. Ujwayele nokuba nomqondo wabazingeli bemvelo, nokuyinto ekwenza uhluke.
Imali, enhle ngokufuna ukuthengiselana nokuthengiselana. Kukhona okubi, noma kunjalo. Imizamo yakho yokonga ingalimaza imali uma ingadala ukuthi usebenzise imali eningi kakhulu ngenxa yokonga okubonakalayo.
Ukuthanda ukunethezeka nobukhazikhazi, usukulungele ukusebenza kanzima ukukhokhela ukunambitheka kwe-champagne yakho. Iso elibukhali lokutshala imali kanye nobungozi bokuphikisana neTaurus kumbeka endleleni yokuba ngusozigidi kusukela esemncane. ITaurus ingaba usozigidi ojwayelekile kwamakhelwane uma esebenza futhi esebenzela ukuqongelela imali esikhundleni sokuyisebenzisela izinto.
Ngaphandle kwenhloso yokuthengisa izimpahla zikanokusho, iTaurus kungenzeka ishiye izindlalifa nezigidi zamaRandi eziqonda umqondo wokuqedwa futhi zingenabo ubudlelwano nezinto zakho ozithandayo, kunezinto eziningi ezinhle ezizayo, kepha ngaphambi kokuthi uqhubeke, don ' ukhohlwe ukubheka isiteshi sethu ukuthola ezinye ezinhle Bhalisela izindatshana ezinjengalezi bese ucindezela isithonjana sensimbi ukuze ungaphuthelwa izibuyekezo! IGemini: Yize ungenasithakazelo sokwenza imali, ezweni elibuswa imithombo yezokuxhumana, uku-element yakho lapho i-Influencers iyinketho ebonakalayo yomsebenzi. Lolu hlobo lomsebenzi likuvumela ukuthi uzithokozise ngezinto eziningi ngasikhathi sinye. Uzothola i-niche bese uhlala kuyo kuze kube yilapho isithukuthezi sikuthumela ukuthi ubheke okuthile okuthakazelisa ngokwengeziwe.
Ungakhubazeka ngephutha empumelelweni yezezimali esikhundleni sokuceba ngoba ukhathalela kakhulu ukuqongelela amaqiniso nolwazi kunemali. Umdlavuza: Umdlavuza ungusomabhizinisi wemvelo. Unekhono lokunikeza abantu abakudingayo nabakufisayo.
Kepha ukuceba kuzohlala kuyinto encane enkalankala, isifiso sayo esikhulu ukwakha okuthile okuzobasiza banakekele abantu babo akuhlangene nokuceba, okungenzeka ukuthi kuyinto enhle njengoba ungakulungiselanga lokho kuthatha ukuceba. Ukuze ube mkhulu, imvamisa kufanele uphume endaweni yakho yokunethezeka, ngoba lena ayi-no-no enkulu kuwe. Banokuthambekela okungokwemvelo kokunikela ngemali yezinto ezihlala njalo, ezizinzile ezifana nezindlu ezithengiswayo nezimali zomhlalaphansi.
Eqinisweni, umdlavuza kungenzeka ube usozigidi ezingama-401,000 ngosuku olulodwa. Leo: Izigidi zikaLeo zivame ukuza nodumo nokwethembeka komkhiqizo. Kepha ngenkathi uLeo ehehwa ukubenyezela negolide, ungahle ulwele ukuqongelela ingcebo.
Yize ithalente nomoya womuntu uphumelele, uLeo uthola ingcebo yakhe ikakhulukazi ekunakekelweni akutholayo kanye namandla okuveza ukwethembeka kubalandeli bakhe nakubantu abathandayo kungasiza, ezweni lama-selfies, ekufuneni ukunakwa ifomu lobuciko ukudala ingcebo. Ukuthonya nokuziphakamisa akukaze kube nenzuzo enkulu njengangaphambili, futhi lokhu kuyindaba kaLeo. IVirgo: NjengeVirgo, kungenzeka ukuthi awunawo umkhuba wokuba ngusozigidi, kepha lokho akusho ukuthi awukwazi ukuceba.
Banekhono kakhulu enkonzweni futhi imvamisa bathola injabulo ezintweni zokuzilibazisa eziba amatoho. Kepha ngokujwayelekile, uVirgo ulwela ukupheleliswa, hhayi impumelelo yomhlaba, futhi kungenzeka abe usozigidi ngokusebenza nomuntu ongumuntu wokusebenza ngenkathi esebenza njengobuchopho. Lokho okuqoqwa yiVirgo kuze kube phakade kungenzeka.
Lapho ukhuthazwa ukuqoqa imali eningi, ngisho nezigidi, kuyaqabukela ngokuzicebisa wena. Banamathuba amaningi okusebenzisa imali ukwenza umhlaba ube indawo engcono. ILibra: ILibra ethanda okunethezeka isebenzisa imali ngokushesha njengoba kufanele, okusho ukuthi mhlawumbe ngeke ibe usozigidi weqiniso ngokwabo.
ILibra ibuye ithambekele ekupheni ngokweqile, okuvela esifiso sokuthandwa yiwo wonke umuntu. Uvame ukuwabalekela amathuba afaka ubungozi obuningi futhi uthembe imizwa yakho ngoba wesaba ukuthi uzodumaza umuntu futhi ungaze ucebe. Futhi esikhundleni sokucela usizo noma ukufuna amathiphu, ukholwa ngokuzenzakalela ukuthi akekho ongakukhomba endaweni efanele.
Leyo micabango eyehlisayo ingaba nobuthi, iLibra, kepha kufanele uyikhiphe ekhanda ngaphambi kokuba uzame futhi. Ukuceba akulula, kepha uma konke unemicabango engemihle ngeke kusebenze. IScorpio: Umphathi wezimali, uScorpio uyakwazi ukuthatha ingozi ebaliwe futhi ufunda ngisho nabantu abakude kakhulu njengencwadi.
Uthando lwakho lwangempela ngamandla, hhayi imali, kepha uyawazisa impela amandla angathengwa yimali. IScorpio sinamathuba amaningi kunezinye izimpawu eziningi ze-zodiac sokuba ngusozigidi, uma befuna ngempela nalapho iScorpio ifuna okuthile, bazokufa ngaphambi kokuba badele. IScorpio iyaqonda ukuthi hhayi nje ukuqoqa inkokhelo, kodwa nokwenza imali ikusebenzele.
Ukutshalwa kwezimali, ikakhulukazi imali ebolekiwe kanye nezinsimbi zezezimali kuyakhanga amathuba okuthola ingcebo emabhizinisini anenzuzo afihliwe futhi angcolile njengokulahlwa kukadoti nokuhlanzwa kwendawo yobugebengu. I-Sagittarius: I-Sagittarius isethubeni elikhulu lokwenza umcebo wayo ekugugeni noma ngokuholwa ngumuntu osekhulile ngoba babona ubusha njengesikhathi sokutholwa nesipiliyoni. Eyaziwa njengesibonakaliso senhlanhla, ungathola ukuthambekela okuphuma enhlanhleni enkulu noma ngesikhathi esifanele.
NjengoSagittarius, uhlala uyikho okudingayo futhi uqhubeke uzama izinto ezintsha. Fakela izikimu ezisheshayo ukugwema umsebenzi ojwayelekile. Ungumbonisi obona izitayela ngaphambi kokuthi zipholile futhi akhiphe isihogo kuzo.
Ukuthi uhlala isikhathi eside ngokwanele ukuze uzuze ngentshiseko yakho kuyindaba ehlukile, kepha inhlanhla yemvelo ikusindisa ekugcineni. ICapricorn: ICapricorn iyisibonakaliso sesibili okungenzeka sibe ngusozigidi futhi ibizoba ngeyokuqala ukube umhlaba ubungumphakathi ophumelelayo. I-CEO ezelwe edonsa kanzima kwezezimali akuyona inketho yeCapricorn ezimisele kahle efanelekile ukwakha umbuso ngokutshala imali nokwenza izinqumo ezihlakaniphile zezimali.
Kungathatha iminyaka ukwenza umehluko omkhulu, kepha uzothola okufunayo ungakugcobi ebusweni bomuntu. Kodwa-ke, lokhu kungasho amahora amade uwedwa, ukungaqondwa kahle, nokukhetha umsebenzi ngaphezu kobuhlobo ps. Ngaphandle kokuthi ukhubazeke ngokwesaba ukwehluleka, uzobe unqwabelanisa izigidi ngaso sonke isikhathi ukudala hhayi kuphela ukuphepha kepha futhi nefa lomndeni wakho.
Kuyavunywa, izingane zakho zidinga ukuzenzela imali njengoba kungenzeka usebenzise imali yakho enkulu ezikhumbuzo ezinkulu ekufezeni kwakho lapho umdala futhi uphumelele. I-Aquarius: Ubuchwepheshe besimanje sebenze izigidigidi ngophawu olungelona olokuthanda izinto ezibonakalayo lwe-Aquarius Zodiac, u-Aquarius, ozoceba ngengozi, bese enikeza konke noma athenge idolobha ukuze ozakwabo bahlale ngokuthula nangokuzwana ngaphandle kobuhlanga. Kungenzeka ukuthi awunantshisekelo ezinzuzweni zomhlaba noma ngabe uvela emalini.
Okuxakayo ngukuthi lokhu kuzinikela okuphelele ezintweni ezingezona ezomhlaba kukusiza ekutholeni amakhono namakhono okwenza abantu bakukhokhele imali eshisiwe. Uzokwamukela imali inqobo nje uma une-accountant osebenza ngempela ngezindaba zezezimali futhi unenkululeko yokuba ngumuntu wakho wokuqamba futhi othusayo. Ama-Pisces: Ngokuqinisekile uyisibonakaliso se-zodiac onentshisekelo emhlabeni wezinto ezibonakalayo, ukuncintisana kanye nebhizinisi.
Ingozi yezinhlanzi ukwethemba labo abafuna ukuzithathela imali yabo ngenkathi bematasa befihla umhlaba wangempela ezweni lokubukeka nokugwema izinto ezinjengebhajethi namabhalansi. Uyakholelwa kwizimpawu ze-zodiac Ucabanga ukuthi ngenxa yesibonakaliso sakho se-zodiac ungaceba uphumelele? Sazise esigabeni sokuphawula ngezansi!
Yisiphi isibonakaliso iPisces esithandana naso?
Kuyiniinhlanzi'okuhle kakhuluuthandoukufanisa? I-izimpawuezihambisana kakhulu ne-inhlanziyiScorpio, iTaurus, iCancer, kanye neCapricorn.inhlanziinokuxhumana okuqinile namanye AmanziizimpawuI-Cancer ne-Scorpio, kepha futhi iyafanangobaUmhlabaizimpawuITaurus neCapricorn.amashumi amabili. 2020.
Izindlela ezi-3 zokuthola uphawu lwe-Pisces zodiac ukukuthanda Uma usebudlelwaneni nobuntu bePisces futhi ufuna ukumenza athandane nawe. Hlala ubukele. Ngoba esihlokweni sanamuhla ngizokunikeza izeluleko ezi-3 ezilula nezihamba phambili zokuthi ungalunqoba kanjani uphawu lwe-zodiac Pisces ngokushesha okukhulu.
Kepha ngaphambi kokuthi ngikutshele ukuthi umthanda kangakanani kuwe, ngifuna nje wazi izinto ezithile ezisobala ngamaPisces. IZINTO ezingakusiza uqonde kangcono laba bantu. Ngoba noma ngabe usazi lesi sibonakaliso se-zodiac isikhathi eside, akusho ukuthi ungathandana nobuntu bePisces.
Iningi lethu licabanga ukuthi siyabazi abangane bethu nalabo esisebenza nabo emphefumulweni abazalwe kusuka ku-A kuye ku-Z ngaphansi kophawu lwePisces. Kepha akulona iqiniso. Ngoba lolu phawu lwe-zodiac luyinto ezolile, eguqukayo futhi enobuqili ngokoqobo.
Ubuntu obunohlobo oluthile lomlingo uma kukhulunywa ngokuxhumana nabanye. AmaPisces AMAZING kno wa psychology womuntu ngakho bahlala bekwazi ukwenza okulungile ukwenza abanye bawele kubo. Kepha okufanele ukwenze uma kunguwe ozowina uphawu lwenhliziyo yePisces, nazi izeluleko zami ezi-3.
Inombolo yethiphu 1. Phakathi kwabo bonke abantu bezimpawu zezinkanyezi, ama-Pisces yiwona kuphela athathwa njengabuthakathaka, angenakuzisiza, futhi anamahloni. Ngakho-ke ungathola inzuzo yangempela kukho.
Ngiqonde ukuthi uma uzethemba, uqine futhi mhlawumbe ucebile ubuntu umnyango wempumelelo yakho endleleni yokukhohliswa kwezimpawu zePisces.
Manje ungathi, 'Ukhuluma ngani, ngamunye wethu ufuna ukuba nomlingani ocebile kunabo bonke othandweni'. Yebo, kuyiqiniso ...
Kepha abantu bePisces akufanele bakukhombise obala. Kufanele wenze ohlangothini lwakho oluhle kakhulu lwe-Show ukuze wenze ukuvela. Kepha uma ungakwenzi, bazoqhubeka nokuphila njengoba babephila phambilini.
Yaneliswa yikho konke kumzuzu wamanje, khombisa ububele kuyo yonke into nawo wonke umuntu ngaphandle kokucela ukubuyiselwa utho, izimpendulo ku-t. ukuthola Ubuza lokho abanye abangakutholi, yile ndlela inhlanzi eyodwa ehlala ngayo empilweni yansuku zonke. Kepha uma unganikela ngehlombe nokuzethemba kwakho kumzuzu onzima, kungaba yindlela yokuqala yokwenza ukuthi umphefumulo womphefumulo wakho wePisces athandane nawe - konke endaweni ethile ekujuleni ngaphakathi kwakhe ulindele usizo nokunakwa okuvela kuwe.
Ngakho-ke gcina lokhu engqondweni bese usebenzisa lokhu njengethuluzi ukuthonya umngani wakho. Inombolo yethiphu 2. Uma ufuna ukugcina amaPisces akho ehehwa nguwe, bese uzama ukukhanga nokuthandana.
Ubudlelwano nezimbali, ukuhamba okuvamile ngaphansi kwenyanga kubusuku obushisayo behlobo, konke lokhu kubalulekile lapho uthandana nesibonakaliso sePisces Njengomthetho, lobu buntu buthanda imizwa emisha eminingi nokuhlangenwe nakho kwempilo. Uma unobuhlakani obuncane engqondweni yakho uqonda ukuthi ungabhoreki kanjani nomphefumulo wakho, khona-ke uzokwazisa izenzo zakho ezingavamile. Uphawu lwe-Pisces zodiac ngumuntu obucayi kakhulu nozwela onememori engakholeki.
Lapho ubeka okuthile okuyigugu ngempela noma okuthusayo, umngane wakho othandekayo akasoze akukhohlwa. Yingakho kuhlale kudingekile ukuthi kube nendlela ekhethekile yokubhekana nabantu abangenalwazi futhi abazwelayo njengamaPisces. Kepha uma usuhlulekile, kufanele uhambe ibanga elide ukufakazela ubumsulwa bakho futhi ubhebhethekise ukuphikisana ebudlelwaneni bakho.
Ngamanye amagama, abesilisa nabesifazane bePisces bangaba njengezingane ezincane ezinabalingiswa abaguqukayo. Uma ungabaniki amaswidi, bazoqala ukukhala. Ngakho-ke zama ukukhetha isikhundla esifanele ebudlelwaneni bakho, ngaphandle kwalokho uzolwa.
Inombolo yethiphu 3. Uma kuqhathaniswa nezinye izimpawu ze-zodiac, uPisces ungumuntu onezintshisekelo eziningi kanye nemibono emihle yokuphila okujabulisayo. Ngakho-ke uma unokuthile enifana ngakho, ngiqonde ukuthi, uma izinto enizithandayo nalokho enikuthandayo kuhlangana, khona-ke nobabili ningathola imiphumela emihle ebudlelwaneni benu.
Ukube benginguwe, futhi uma bengifuna ukudoba ukuze ngithandane nami, bengizozama impela ukwazi ukuthi wenzani empilweni yansuku zonke ngaphambi kokuba siqale ukuphola nokuhlala ndawonye, ​​nakhu uzizwa ukhululekile, o yenza okufanayo. Uma ufuna ukunqoba inhliziyo yomngani wakho wePisces, akunandaba ukuthi owesilisa noma owesifazane ..
Musa ukuphikelela futhi ungakhombisi izinhloso zakho ezibucayi. Ngoba kungamsunduzela kude. Imvamisa ibadinga ubuntu bePisces isikhala esanele nesikhathi sokuhlaziya okuningi, ikakhulukazi maqondana nobudlelwano bomuntu siqu, kepha akusho ukuthi kufanele ulinde usuku oluhle eza ngalo kuwe kuqala bese ethi, 'Ngizizwa Ngiyaphila nawe, ngifuna ube ngumfana wami noma intombi yami. Cha, ungakulindeli, esikhundleni sokuthemba ukubona isenzo somuntu esingaphephile njengePisces, vele uqhubeke, udlale ngothando, uncome futhi ujabule ndawonye.
Ukusebenza, ukuba qotho nokuba nekhono ngenkathi ufunda uphawu lwe-Pisces zodiac kungamenza athandane nawe.
Iyini inyanga yePisces?
inhlanzi(Februwari 19 - Mashi 20)
Kusho ukuthini uma ngizalwa ngo-Okthoba?
Njengabanye abantwana bakaSepthemba, laboezelwengaphambiOkthoba24kukhonaihlukaniswe njengeLibra elinganiselayo nenenhlalo. LaboezelwengemuvakukhonaAma-Scorpios, aziwa ngokuba nothando, athembekile kepha anenkani. Ukusebenza kanzima nokuzimisela, laboabazalwe ngo-Okthoba kukhonakonke mayelana nebhizinisi.1. 2018.
Yini izinombolo zePisces zenhlanhla?
Inombolo yenhlanhla: 1, 4 no-3 yiboizinombolo zenhlanhlaOkweinhlanzingokuya nge-Numerology Calculator.UnenhlanhlaUmbala: Okubomvu nokuphuzi kungagqokwa ngu-ainhlanzi, njengoba kunjalounenhlanhlayabo.
Yimuphi umbala onenhlanhla yePisces kusasa?
Ibuswa yiplanethi iJupiter, inemvelo emibili futhi iyisibonakaliso somlilo. Okuphuzi kanye ne-orangeimibalakuthathwa njengokuhle kwe-inhlanzi. Ngaphandle kwaleziimibala, pinkUmbalakunjalounenhlanhla.
Uma ngabe wazalwa ngoMashi 23 namuhla, uphawu lwakho lwe-zodiac nguRam, okuba wuphawu lwabantu abazalwa phakathi kuka-Mashi 21 no-Ephreli 19. Uyi-Aries ngenxa yesimo sokuzalwa kwakho, futhi ...
Yini i-horoscope kaJuni 8?
Siyini isibonakaliso sakho se-Zodiac uma ngabe uzalwe ngoJuni 8? Uma uzalwa ngoJuni 8 th, uphawu lwakho lwe-Zodiac yiGemini. NjengoGemini owazalwa ngomhla ka-8 Juni, waziwa njengomuntu ongenasineke kakhulu futhi ...
Novemba 14 Zodiac is Scorpio - Full Horoscope Personality NjengoScorpio owazalwa ngoNovemba 14, ungahle ube nokuthambekela kokwahlulela kodwa kukonke, ube nobuntu obuqondayo nobunakekelayo. Ungakwazi...
Luyini uphawu lwezinkanyezi ezihambelana nosuku lomuntu ngoJanuwari 27?
Uphawu lwe-zodiac ngoJanuwari 27 ngu Aquarius . Uphawu lwezinkanyezi: Umphathi Wamanzi. Lolu phawu lwe-zodiac lubhekwa njengomthelela kulabo abazalwa ngoJanuwari 20 - Februwari 18, ngaphansi kwe-Aquarius zodiac ...
Disemba 10 Usuku lokuzalwa komuntu
Ingabe uDisemba 10 wusuku lokuzalwa oluhle?
Okthoba 4 I-Horoscope yokuzalwa
Yini i-horoscope ka-Okthoba 4?
I-Taurus May '14 I-Horoscope
Ubani okufanele uTaurus ashade naye?
Ukuhamba Kwenyanga Ngezimpawu
Inyanga ihamba kanjani phakathi kwezinkanyezi?
Ephreli 14 I-Horoscope Yokuzalwa
Yini i-horoscope yango-Ephreli 14?
Februwari 8 Usuku lokuzalwa komuntu
Yini i-horoscope yangoFebhuwari 8?
I-Aquarius Jan'14 Horoscope
Yini i-horoscope kaJanuwari 14?
IScorpio May '13 Horoscope
Uthando ku-Zodiac: Izinkanyezi Zibuthinta Kanjani Ubudlelwano Bakho
Ingabe izimpawu zezinkanyezi empeleni ziyabuthinta ubudlelwano?
Okthoba 13 I-Horoscope yokuzalwa
Kusho ukuthini ukuzalwa ngo-Okthoba 13?